Zavamaniry hitombo jiro - Mpamboatra mpamokatra hazavana any China, mpamatsy
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL01
Ny jiro maniry tsotra sy maniry tsara dia hikarakara manokana ireo zavamaniry malalanao, miaraka amin'ireo jiro maniry etsy ambony ary mitazona etsy ambany hitazona. Izy io koa dia mametraka ny maitso ho sary mahafinaritra hahafahanao mankafy azy ireo tsara. Azonao atao ny mametraka azy io amin'izay tianao, izany no manampy ny jiro maniry.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL02
Ity modely ity dia natao ho an'ireo izay maniry hikarakara manokana ny zavamaniry na hampitombo ny zaza mandinika ny zavamaniry. Loko tsara telo ho an'ny safidy, manampy koa amin'ny famakiana amin'ny maizina miaraka amin'ny zoro 360 degre ny jiro.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL03
Miaraka amin'ny famolavolana volotsangana voajanahary voajanahary ity modely ity dia toa tsotra sy kanto. Ny spectrum feno dia miantoka ny zavamaniry mety hitombo ara-pahasalamana toy ny maniry ambanin'ny masoandro ary ny zavamaniry tianao dia mety ho eo akaikinao mandrakariva andro aman'alina anaty trano. Ary ity maodely ity dia tsy azonao ampiharina fotsiny amin'ny zavamaniry, fa azonao atao koa ny manamboatra trondro, mety ho haingon-trano mahafinaritra izany.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL04
Ho tianao ity zavamaniry modely hitombo jiro ity, endrika tsotra tsotra izy io ary miaraka amina fiasa marobe, mpilalao mozika lanyard, ionoka mamoaka fanadiovan-drivotra sy fanamainana. Safidy tsara ho an'ny zavamaniry sy haingon-trano ao an-tranonao izany.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL05
Ny soilless dia maniry jiro, tsy misy fetra amin'ny vanim-potoana na fetra amin'ny toetr'andro. Azonao atao ny manana ny zaridainanao anaty trano, ho an'ny legioma salady vaovao, ho an'ny voninkazo na ho an'ny zavamaniry tianao. Izy io dia miaraka amin'ny jiro fiara / paompy / fantsom-bolan'ny rano / fanairana momba ny fatran'ny otrikaina ho an'ny fambolena fanamoriana ary mandritra ny 50 000hrs mandritra ny androm-piainany.
Raha jerena kely fotsiny, dia haingo tsara ho an'ny lakozia na efitrano fandraisam-bahininao. Izy io dia miasa mba hanampiana anao hamboly legioma / voninkazo / zavamaniry ara-pahasalamana mandritra ny 50 000hrs mandritra ny androm-piainany. Manampy ny famakinao amin'ny maizina miaraka amin'ireo maitso tianao indrindra eo akaikinao. Apetraho amin'izay tianao izany, miaraka amina tara-pahazavana feno spectrum.
Vahaolana tokana fanazavana zaridaina an-trano izy io. Ny jiro mitombo LED dia manahaka ny tara-pahazavana amin'ny masoandro, mampiroborobo ny fotosintesisan'ny zavamaniry amin'ny toetrandro rehetra. Ny hazavana voajanahary mafana dia mety kokoa amin'ny zavamaniry anaty trano ary mankafy. Rafitra mitombo rano hidrôzenina izy io, madio kokoa noho ny maniry anaty tany. Izy io dia namboarina niaraka tamin'ny rafi-pandehanan'ny rano, mampitombo ny oxygen ao anaty rano. Sakafo mahavelona kokoa noho ny amin'ny tany, ary maniry haingana kokoa. Amin'ny ankapobeny dia amin'ny toetrandro mandavantaona iny, ary ny zavamaniry dia afaka mitombo tsara sy haingana kokoa. Izy io dia mety ho fanomezana fanabeazana ho an'ny ankizy, manampy azy ireo hitandrina ny fizotry ny fitomboana. Ny ray aman-dreny sy ny raibe sy renibe koa dia ho tia legioma vaovao mandavantaona.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL07
Ny endrika maoderina tsotra dia manome azy io amin'ny toerana rehetra apetraka. izany’Mora miasa miaraka aminy, jiro fiara, paompy fiara, fanamorana fotoana samihafa ho an'ny safidinao. Afaka mankafy tanteraka ny fahafinaretan'ny fikolokoloana zavamaniry ianao.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL08
Ity maodely ity dia azonao ambolena zavamaniry 12, it’s misy jiro fiara mandeha / miasa paompy / mpankafy manan-tsaina ho an'ny fambolena mora. Azonao atao ny manamboatra ny haavony mba hifanaraka amin'ny zavamaniry sy zavamaniry samihafa’ vanim-potoana samihafa. Ary miaraka amina endrika tsotra madio madio dia hankafizinao ny fikolokoloana zavamaniry, basil, thyme, olon-kendry, persily, cilantro, tomatos serizy, rosemary, peppers, voninkazo ary frezy sns.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL09
Amin'ity maodely lehibe ity dia afaka mampitombo zavamaniry 14 ianao. Fomba fambolena zavamaniry telo samy hafa, paompy fiara, fitoeran-drano lehibe, spectrum feno, haavo azo ovaina, fikarakarana feno ny zavamaniryo. Ary manana safidy loko bebe kokoa amin'ny tsiro ianao. izany’safidy tsara ho an'ny zaridaina hydroponic anaty trano.
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL10
Ilay zavamaniry tsotra noforonina madio dia mampitombo jiro sahaza ny zavamaniry 1, na ny tany na ny hydroponic. Tapaka ny jiro automatique mba hitomboan'ny zavamaniryo. Apetraho ao aminy ilay zavamaniry malalanao ary apetraho amin'izay tianao. Ny hazavana dia afaka manampy amin'ny famakiana amin'ny maizina, afaka mankafy kokoa ny famakiana miaraka amin'ny zavamaniry malalanao eo akaikinao ianao.
Ity maodely ity dia azonao ambolena zavamaniry 4. Ny spectrum feno sy ny mode 3 dia mikarakara manokana ny zavamaniry ary mampifaly anao ny planina. Ny jiro mandeha ho azy / paompy fiara / jiro azo ovaina / haavon'ny rano dia manampy amin'ny fambolena mora.
Ity jiro maniry maniry tsara ity dia azo zahana zavamaniry, voninkazo, legioma na zavamaniry hafa tianao. Amin'ny famolavolana tsara dia azonao atao ny mametraka ny voninkazoo na aiza na aiza ho haingo koa. Spektrum feno / maody 3 ho an'ny jiro mihombo / mandeha ho azy / paompy fiara / jiro avo azo ahitsy / fanairana rano, hahafinaritra ilay fambolena mora.
Mitombo Lightin, Mitombo Ligh, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mamboly hazavana, Mitombo ny avotra, Jiro zavamaniry,